တီအာဝိုင် : ကယ်တင်ရှင်
တခါတုန်းက ချက်ဂ်ျ ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ အသင်ဝင်းအတော်တော်များများ ထွက်ခွါသွားပြီး ငါး ဦး သာ ကျန်တော့တဲ့အတွက် ရပ်တည်ဖို့ ခတ်ခဲတဲ့ အခြေနေတစ်ခုကိုရောက်ခဲ့တယ်။ တစ်ဦးက ဓမ္မဆရာနဲ့ ကျန်လေး ဦးက အသက်ခြောက်ဆယ်ကျော် အဖိုးကြီးတွေ။
ချက်ဂ်ျကျောင်းရဲ့ အနီးနားက တောင်ပေါ်မှာ အသက်ကြီးလို့ အနားယူသွားပြီဖြစ်တဲ့ ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီး တစ်ပါး သီတင်းသုံးနေတယ်။ ဓမ္မဆရာက ဘုန်းတော်ကြီးဆီကို ဆည်းကပ်ခစားပြီးတော့ ချက်ဂ်ျကျောင်းကြီး ဆက်လက်လည်ပတ်နိုင်အောင် ဘယ်လိုလုပ်သင့်သလဲဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကြံဥာဏ်များရယူ ဖို့ ရန် အတွက် သွားရောက် ခဲ့တယ်။ ဘုန်းတော်ကြီးနဲ့ ဓမ္မဆရာတို့ ဟာ အချိန်အတော်ကြာကြာလေးစကားပြောဖြစ်ခဲ့
ပြီး ဓမ္မဆရာက အကြံဥာဏ်တောင်းလာတဲ့အခါမှာ ဘုန်းတော်ကြီးကကျုပ်မှာ အကြံဥာဏ်တော့ ပေးစရာမရှိဘူး
ဒါပေမဲ့ သေချာတာတစ်ခုတော့ပြောရဲတယ်၊အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ ဒီကျောင်းတော်ကြီးအတွက် ကယ်တင်ရှင် ဟာ သင်တို့ ငါးရောက်ထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်တယ် လို့ ပြောလိုက်တယ်။
ဓမ္မဆရာက ကျောင်းပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာ ဘုန်းတော်ကြီးပြောလိုက်တဲ့အတိုင်း တခြားအဖိုးအိုလေးရောက်ကို ပြန်ပြောပြတယ်။နောက်လအနည်းငယ်ကြာလာတဲ့အခါမှာ အသင်းသားတွေအချင်းချင်း မေးမြန်းလာကြတယ်။
ကယ်တင်ရှင်ဟာ ကျုပ်တို့ ထဲကတစ်ယောက်..ဟုတ်လား..လို့ ။ အဲ့ဒိနောက်မှာ ဘုန်းတော်ကြီးကတော့ မဟုတ် တန်းတရားတွေ လျှောက်ပြောမှာမဟုတ်ဘူး ကျုပ်တို့ ထဲက ကယ်တင်ရှင်ဟာ ဘယ်သူမှန်းလဲ မသိဘူး အဲ့ဒိတော့ကျုပ်တို့ အနေနဲ့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အပြန်အလှန် ရိုရို သေသေလေးလေးစားစား ဆက်ဆံ မှဖြစ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်လည်း တကယ့်ကယ်တင်ရှင် စစ်စစ်တွေလို့သဘောပိုက်ထားလိုက်ကြတယ်။ အရင်နဲ့ မတူလုံးဝ ထူးကဲသော ရိုသေသမှုတွေနဲ့ တုန့် ပြန်ဆက်ဆံကြတယ်။
ဒီလိုနဲ့ အချိန်အနည်းငယ်ကြာလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ချက်ဂ်ျကျောင်းက လူအနည်းငယ် လာလည်စပြုလာပြီး သူတို့ ရဲ့ အချင်းချင်း နူးညံ့သိမ်မွေ့ စွာ ဆက်ဆက်ပုံ၊အပြန်အလှန် ကြင်နာကြပုံ၊ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ဂရုစိုက်အလေးထားပုံတွေကို သတိထားမိလာကြတယ်။အဲ့ဒိနောက် ဘာရယ်မသိ ချက်ဂ်ျကျောင်း ဝင်ထွက်တဲ့ သူတွေပြန်များစပြုလာတယ်။နောက်ရောက်လာတဲ့သူတွေကလဲ အဆင့်ဆင့် သူတို့ ရဲ့ မိတ်ဆွေတွေကို ခေါ် ဆောင်လာကြတယ်။ဒီလိုနဲ့ ချက်ဂ်ျကျောင်းလေးဟာ အရင်ထက်မက ပြန်လည်စည်ကားလာခဲ့တယ်။ ဘုန်းတော်ကြီးရဲ့ ကြီးမားတဲ့ အကြံဥာဏ်နဲ့ အမျှော်အမြင်က လေးစားထိုက်ပါပေတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဝန်းကျင်လူ့ အဖွဲ့ အစည်းတွေမှာလဲ ဒီအတိုင်းပါပဲ။ အဖွဲ့ အစည်းအတွင်းမှာမှ အချင်းချင်း လေးစာ ယုံကြည်မှု၊မြတ်နိုးချစ်ခင်မှုတွေ ဆိတ်သုန်းလာမယ်ဆိုရင် အထီးကျန်လူ့ အဖွဲ့ အစည်းတစ်ခု ဖြစ်သွားမယ်ဆို တာ မြေကြီးလက်ခပ်မလွဲပါပဲ။
The pastor, returning to the church, told the church members what the Bishop had said. In the months that followed, the old church members pondered the words of the Bishop. “The Messiah is one of us?” they each asked themselves. As they thought about this possibility, they all began to treat each other with extraordinary respect on the off chance that one among them might be the Messiah. And on the off, off chance that each member himself might be the Messiah, they also began to treat themselves with extraordinary care.
Posted by Nan Shin at 6:39 PM